Muhiimadda Wargeys Guji Guji | Martech Zone
Delivra, macmiilkayaga email marketing kafaala qaaday, wuxuu abuuray warqad cad oo muujinaysa muhiimada riix maadaama ay noqon karto farqiga u dhexeeya samaynta iibka.
Ahmiyada Guji warqad cad ayaa ka hadlaysa caqliga ka dambeeya guji kasta, xeeladaha lagu hagaajinayo sicirka gujinta, iyo khibradaha nolosha ee dhabta ah si loo muujiyo sida fahamka muhiimadda gujintu u caawin doono dadaalka suuqgeynta iimaylka shirkaddaada.
Kordhinta sicirka gujinta ee suuqgeynta emailkaaga waa natiijo ka timid xeelado kala duwan oo suuqgeyn email ah oo la isku daray. Waa inaad taqaanaa dhagaystayaashaada, siisaa wax u qalma guji, oo samee waraaqo kiciya oo isdaba joog ah si aad u ogaato isku darka sida ugu fiican ugu shaqeeya ururkaaga.
U soo dejiso warqadda cad wixii macluumaad ah ee weyn ee ku saabsan sida loo hagaajiyo qiimaha gujinaya marinnada emaylkaaga!
Tags: dhagsiidelivraEmail MarketingMuhiimadda gujintaKhayraadkaWarqad cad